सुतेकै अवस्थामा परिवारको सपनाहरु टुक्राटुक्रा परेर रातो बाकस फर्किदै ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home प्रवास सुतेकै अवस्थामा परिवारको सपनाहरु टुक्राटुक्रा परेर रातो बाकस फर्किदै !
सुतेकै अवस्थामा परिवारको सपनाहरु टुक्राटुक्रा परेर रातो बाकस फर्किदै !
२०७६, १ फाल्गुन बिहीबार ०९:५४
गएको सोमबार बेनी नगरपालिका–९,घतान धुबुकोटका कमल कार्कीको सुतेकै अवस्थामा ज्यान गयो । अचेत अवस्थामा रहेका कार्कीलाई कम्पनीकै सहकर्मीले तुरुन्त अस्पताल पु¥याएपनि उनको ज्यान जोगाउन सकेनन्। बि.श २०७२ सालमा खाना खाएर सुतेका उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३,दाना काभ्रेका समबहादुर पुन ओछयानमै मृत भेटिए ।
बि.श २०७४ चैत्र महिनामा मालिका गाउँपालिका वडा नं २ जेमका धर्मलाल रोका ड्युटी गर्ने क्रममा बसिरहेको कुर्चीमै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। मृतक रोकाका माइला दाई भक्तबहादुरको कतारमा र जेठा छोरा तमबहादुरको मलेशियामा करिव १४ बर्ष अगाडी ज्यान गएको थियो।
सुत्नु अगाडी परिवार र साथीहरुसँगै कुराकानी गरेका विहान उठ्ने क्रममा अचेत अवस्थामा भेटिने गरेका छन्। तीन दाजुभाईको मृत्यु एकै प्रकृतिको थियो। वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा तीन छोरा गुमेपछि अहिले पनि धनबहादुर र लिलमती दम्पती स्तब्ध छन् । सोही बर्ष रुम गाउँकै बुद्धिबहादुर परियार र बेनी नगरपालिका–४, सिंगा सोटाका दिल बहादुर घर्तीको समेत सुतिरहेको अवस्थामा ज्यान गएको थियो । पछिल्लो एकदशक बैदेशिक रोजगारमा यसरी नै सुत्यासुत्यै बितेका म्याग्देलीको संख्याको यकिन तथ्यांक छैन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त तथ्याङ्कमा विदेशमा मृत्यु हुनेमा अधिकांस सुतेकै अवस्थामा ज्यान गएको देखिन्छ । सुत्नु अगाडी परिवार र साथीहरुसँगै कुराकानी गरेका विहान उठ्ने क्रममा अचेत अवस्थामा भेटिने गरेका छन्।सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या डरलाग्दो छ। समान्य स्वास्थ्य अवस्था,अघिल्लो दिनसम्म राम्रो कुराकानी भएको मान्छे,भोलिपल्ट अचानक मृत्युको खबरले रोजगारीमै रहेका नेपालीलाई समेत अपत्यारिलो खबर हुने मोना अन्तराष्ट्रियका महासचिव बिक्रम कार्कीले बताए।
कमल कार्की ‘सुतेकै ठाउँमा ज्यान गुम्नुको कारणबारे बहस हुन सकेकौ छन्,‘कसरी मृत्यु भयो भन्ने चर्चा एकदुई दिनमै सेलाउँछ’ कार्कीले भने । खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न पुग्ने सरकारी अधिकारीले समेत यस विषयमा खासै चासो नदिने गरेका छैनन् । पीडादायी अवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्ने खाडीमुलकमा रहेका म्याग्देलीको भनाई छ । खाडीमा ज्यान गुमाउने नेपालीमा अधिकांस दुर्घटना र हृदयाघातबाट हुने गरेको छ।
बेनी अस्पतालका क्लिनिकल कोअर्डिनेटर डा.नवराज बस्ताकोटीले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भएको बताए । खाडीको चर्को घाममा दिनभर काम गर्ने र आएर एसीमा सुत्ने गर्दा पनि कतिपय श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको बताए। सुतेकै अवस्थामा अचानक मृत्युको कारण धेरै रक्सी खाने, पानी कम पिउने, समयमा खाना नखाने, गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित भएको कारण समेत हुने बताए ।
‘थकित अवस्थामा रक्सीको ठाउँमा अन्य पदार्थ समेत सेवन गरेको देखियो,‘त्यहाँको पोष्टमार्टम रिपोर्टलाई शव बाकसमै हालेर ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ’ डा. बस्ताकोटीले भने । उनले आफ्नो खाडीमुलुकको भ्रमणमा सुतिरहेको अवस्थामा मृत्युको कारणमा असन्तुलन खानपान, कार्यस्थल र बिश्रामस्थलको न्यूतमन आवश्यकताका बारेमा जानकारीको अभाव लगायत रहेको बताए । उनले मुटुका समस्या भएकाहरुलाई खाडीमुलकको यात्रा खतरानक हुने बताए ।
Previous articleचालकको हेलचक्राईले अकालमै ज्यान गुमाउँदै सर्वसाधारण
Next articleपेन्टिङमा जमेका ललिन्द्र थापा मगर